C/rashiid Xidig oo lagu eedeeyay in uu lacag ku qaybinayo magaalada Nairobi - Muqdisho Online
Home Wararka C/rashiid Xidig oo lagu eedeeyay in uu lacag ku qaybinayo magaalada Nairobi
C/rashiid Xidig oo lagu eedeeyay in uu lacag ku qaybinayo magaalada Nairobi
Cabdi Rashiid Xidig oo ka mida musharixiinta u tartamaysa jagada Madaxweynaha ee Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa waxaa lagu eedeyay in uu lacag ku qaybinayo magaalada Nairobi.
Lacag laga soo diray magaalada Muqadishu laguna qiyaasay $100,000 ayaa soo gaartay Musharaxa oo ku sugan magaalada Nairobi. Sida ay noo xaqiijiyeen ilo ku dhaw-dhaw Cabdirashiid Xidig lacagtaas ayaa la soo mariyay Axmad Adan oo loo yaqaano Axmad Dhere oo ah ninka lacagaha u hayo una maalgaliyo Madaxweynw Farmaajo. Lacagta ayaa ayaa asbuucaan dhexdiisa laga qaaday xafiiska ku yaalo bartamaha magalaada Nairobi, dhismaha Bruce Building dabaqiisa 12naad.
Musharaxa oo dareen ka qabo in dowlada Kenya ay taageerayso Axmad Madoobe ayaa lacagta u qaybinayo siyaasiyiin iyo mucaarad ka soo horjeedo Madaxeyne Axmad Madoobe.
Dhanka kale Cabdirashiid Xidig ayaa kulamo kala duwan la qaaday kooxo mucaarad ku ah dowlada Kenya oo waayahan danbe ku mashquulsanaa qaban qaabada jabhad ka soo horjeesato dowlada Kenya taas oo u ololoynaysa in dhulka NFD ee Soomaaliya ka go’do dalka kenya.
Labadii kulan ee u horeeyay ayaa waxa ay ka dhaceen xaafad ku taalo xaafadda loo yaqaano Kaleleshuwa oo ku aadan galbeedka magaalada Nairobi. Gurigaan ayaa waxa degan ganacsade ka soo jeeda deegaanka Wajeer xiriirna uu horay ugala dhaxeeyay Cabdirashiid. Ninkaan ganacsata ah ayaa horay lacag ugu deeqay Cabdirashiid Xidig markii uu u tartarmayay doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka sanadkii hore.
Cabdirashiid Xidig ayaa waxa uu taageero buuxda ka haystaa madaxweyne Farmaajo, waxaana madaxda dowlada Fedaraalka ay ga’aansadeen in uu noqdo musharaxa dowlada FS ee lagu jabinaayo Madaxweyne Axmad Madoobe marka la gaaro doorashada Jubbaland oo la filayo in ay dhacdo bisha Agoosto ee fooda nagu soo hayso.
Previous articleCiidamada AMISOM oo howlgalo lagu sugayo Amniga ka bilaabay Baladweyne
Next articleMW Saciid Deni iyo Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmad oo kulan albaabada u xiran yihiin ku yeeshay Addis Ababa